Hello Nepal News » न कोपा डेल रे, न ला लिगा : बार्सिलोनाको लक्ष्य च्याम्पियन्स लिग !
न कोपा डेल रे, न ला लिगा : बार्सिलोनाको लक्ष्य च्याम्पियन्स लिग !
गत राति स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाले कोपा डेल रे कपको अन्तिम १६ मा दोस्रो डिभिजनको टिम रायो भालेकानोमाथि १–२ को कठिन जित निकाल्यो । कमजोर टिममाथि संघर्षपूर्ण जित निकाल्नेक्रममा कप्तानी लिओनल मेस्सी र फ्रेन्की डे जोङले गोल गरे । सो जितपछि बार्सिलोना अन्तिम आठमा प्रवेश गरेको छ ।
कोपाको अन्तिम आठमा प्रवेश गरेपछि बार्सिलोनाका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले खेलपछि मिडियासँग कुरा गर्दै कोपाको अन्तिम आठमा पुगेकोमा खुसी व्यक्त गरे । तर, उनले आफूहरूको लक्ष्य कोपा कप वा ला लिगा नभएर च्याम्पियन्स लिगको उपाधि भएको प्रष्ट पारे । ‘समग्रमा हामीले आज राम्रो खेल्यौं । हामीले अझै धेरै गोल गर्न सक्थ्यौं । तर, जितेर अर्को चरण जानु नै ठूलो कुरा हो । म खेलाडीको प्रदर्शनलाई लिएर खुसी छु,’ खेलपछि कोम्यानले भने, ‘यो बेस्ट खेल होइन तर एक राम्रो खेल थियो ।’
मिडियाले टोलीको फितलो लय र अन्य उपाधि जित्नका लागि विद्यमान चुनौतीबारे सोधेको प्रश्नमा कोम्यानले बार्सिलोनाले अहिले कोपा डेल रे र ला लिगाभन्दा च्याम्पियन्स लिगलाई सबैभन्दा मुख्य लक्ष्य बनाएको बताए । उनले त च्याम्पियन्स लिग जित्न बार्सिलोनाले कोपा र ला लिगा दुवै गुमाए पनि फरक नपर्ने बताए ।
‘हामी अझैसम्म ला लिगासहित सबै प्रतियोगितामा उपाधि होडमा छौं । बार्सिलोना सबै उपाधि जित्न चाहन्छ,’ कोम्यानले भने, ‘तर, महत्त्वका हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने अवश्य पनि, कोपा डेल रे र ला लिगा हाम्रो प्रमुख लक्ष्य होइन । अहिलेको हाम्रो प्रमुख लक्ष्य भनेको च्याम्पियन्स लिग हो । यो उपाधि जित्नका लागि हामीलाई कोपा र ला लिगाको हारले कुनै फरक पार्दैन । किनभने, बार्सिलोना यो सिजन ठूला उपाधिको खुसी फर्काउन चाहन्छ । यो त्यत्तिबेला पूरा हुन्छ, जब हामी युरोपको च्याम्पियन बन्छौं ।’
कोम्यानले ला लिगाको उपाधि होडबाट बार्सिलोना धेरै टाढा नरहेको बताए । ‘व्यवहारिक रूपले हेर्दा एथ्लेटिको मड्रिडलाई उछिन्न धेरै कठिन छ । तर, असम्भव छैन । लिगमा अझै धेरै अंकको खेल बाँकी छ । बार्सिलोना अझै पनि ला लिागमा फर्किन सक्नेमा विश्वस्त छ,’ कोम्यानले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा हामीले हरेक खेल जित्नका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । बाँकी कुरा हेर्दै जानुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति १५ माघ २०७७, बिहीबार १०:५२